ဖေ့စ်ဘွတ်ခေတ် ကုန်တော့မည်ဟု လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များက ဆို
ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုမှုသည် လာမည့်နှစ်များအတွင်း အလျင်အမြန် ကျဆင်းလာဖွယ်ရှိရာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလသို့အရောက်တွင် အသုံးပြုမှု ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားမည်ဟု အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်သော ArXiv.org. တွင် ဖော်ပြထားသော အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။ နာမည်ကျော် လူမှုကွန်ရက် ကြီးသည် ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာဖွယ်ရှိပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားတွင် အမြင့်ဆုံးအသုံးပြု သည့် အရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။
မန္တလေး မြို့တော်ရှိ မြတ်ရတနာ ကိုယ်ပိုင် ပုဂ္ဂလိက အထက်တန်းကျောင်းရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ဒီးဒုတ် ရေတံခွန်သို့ အပန်းဖြေခရီး သွားရောက်ပြီး အပြန် အေသုံးလုံး ဘိလပ်မြေ စက်ရုံအနီးတွင် ကျောင်းသားများ လိုက်ပါလာသည့် လိုက်ထရပ်ယာဉ်သည် အခြား ယာဉ်တစ်စီးကို ကျော်တက်ရာမှ အရှိန် မထိန်းနိုင်ဘဲ တိမ်းမှောက်သွားခဲ့ကာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျောင်းသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ မြတ်ရတနာ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း ဆရာတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
"ဒေါ့မန်ပရိသတ်၏ ဒေါသကြောင့် မြေစာပင်ဖြစ်သွားရှာသည့် မော်တော်ကား"
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံးသမား တစ်ဦးအတွက် လက်ရှိကလပ်ကို စွန့်ခွာကာ ခါးသီးပြိုင်ဘက်ထံ ကူးပြောင်းခြင်းသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်သည်ကို ရောဘတ်လီဝင်ဒေါစကီး တစ်ယောက် အသေအချာ နားလည်ထိတွေ့ခွင့် ရနေပြီ ဖြစ်သည်။ ပိုလန်လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူးသည် ရာသီကုန်တွင် ဘိုရူးစီးယား ဒေါ့တ်မန်နှင့် စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးတော့မည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထိုအခြေအနေတွင် ဒေါ့တ်မန်၏ ခါးသီး ပြည်တွင်းပြိုင်ဘက် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နှင့် အကြိုသဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ကလေးငယ်များ အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စံနမူနာယူပြီး တိုင်းပြည်အတွက် သာမက လူသားများအတွက်ပါ တန်ဖိုးရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
ကလေးငယ်များ အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စံနမူနာယူပြီး နိုင်ငံ့ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးက အသိအမှတ်ပြုရသော ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်၊ တိုင်းပြည် အတွက်သာမက လူသားများ အတွက်ပါ တန်ဖိုးရှိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားကြရန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ထုတ်ပြန်သည့် အသံဖိုင်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အမှတ်တရစကား ပြောကြားရာတွင် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ဂျာမန်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ မြဂျာမနီသမ္မတ ခရီးစဉ်အတွင်း ဂျာမနီနိုင်ငံ ကုန်သွယ်စက်မှုအသင်း ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ပွဲ အခမ်းအနားကို တွေ့မြင်ရစဉ်န်မာနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ထက်သန်မှုရှိသော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိ
ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးရန် တစ်လကျော် အလိုတွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ဒေါ်လာ ၂၁ ဘီလျံကျော် ရရှိ
၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးရန် တစ်လကျော် အလိုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁ ဘီလျံကျော် ရရှိခဲ့ပြီး ပင်လယ်ရေကြောင်း ကုန်သွယ်မှုမှ ကုန်သွယ်မှု အများဆုံး ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
တောင်ငူ မြို့မဈေးတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဆိုင်ခန်းအားလုံးနီးပါး မီးလောင်ဆုံးရှုံး
တောင်ငူမြို့ မြို့မဈေးတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားနေသည်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် ည ၁၀ နာရီခန့်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဇော်လွင်၊ တောင်ငူ)
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် ညနေ ၆ နာရီ အချိန်ခန့်က တောင်ငူမြို့ မြို့မဈေးကြီး မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဈေးတစ်ခုလုံးနီးပါး လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဈေးဆိုင်ပေါင်း ထောင်ဂဏန်းနီးပါးနှင့် ပစ္စည်းပေါင်းများစွာ လောင်ကျွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ACLEDA Bank မှ ဘဏ်ခွဲများ ထပ်မံတိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘဏ်လုပ်ငန်း အဖြစ် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံမှ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် ACLEDA Bank plc. သည် ယခုနှစ် အတွင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်သော ၄င်း၏ အသေးစား ချေးငွေဘဏ်ခွဲများ အရေအတွက် ၁၈ ခုအထိ ရှိလာစေရန် နောက်ထပ် ဘဏ်ခွဲများ ထပ်မံတိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်သွား မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ချေးငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းခန့်အထိ ထုတ်ချေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
▼ Feb 14 (21)
အရေးပေါ် နှလုံးခုန်စက်များကို မြို့နယ်ဆေးရုံကြီး အေ...
ရဟန်းသံဃာများကို တပ်မတော်က စစ်သင်တန်းပေးခြင်းမရှိဟ...
ဖေ့စ်ဘွတ်ခေတ် ကုန်တော့မည်ဟု လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များက ...
တိုင်းရင်းသားများနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးမှ သန်းခေါင်စာ...
မြန်မာ-အမေရိကန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ...
ဂျပန်၊ ဒိုင်ဝါနှင့် မြန်မာ့သကြား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ေ...
ဗဟို အာဖရိက သမ္မတ နိုင်ငံသို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထပ်မံ ...
"ဒေါ့မန်ပရိသတ်၏ ဒေါသကြောင့် မြေစာပင်ဖြစ်သွားရှာသည်...
အစိုးရအပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပိုလျှံငွေများကို အြ...
ပဲခူးမြို့ ဥဿာမြို့သစ် သီးသန့် ၂၄ ရပ်ကွက်ရှိ ကျူးေ...
ဖဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့တွင် ဗ...
ကလေးငယ်များ အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စံနမူန...
ဂျာမန်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ မြဂျာမနီသမ္မတ ခရီ...
ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးရန် တစ်လကျော် အလိုတွင် ကုန်သွယ်...
တောင်ငူ မြို့မဈေးတွင် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့...
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်သို့ လာရောက်သည့် နိုင်ငံခြားသား ဧ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ACLEDA Bank မှ ဘဏ်ခွဲများ ထပ်မံတ...